Iifom ezahlukileyo zeMigangatho yeMigodi kwiGeology
Igalari yeZenzo zoMbiwa. Ifoto (c) u-Andrew Alden, onikwe ilayisenisi kwi-About.com (inqubomgomo yokusetyenziswa ngokufanelekileyo)
Imikhwa yindlela ehlukileyo yokuba i-crystal crystals ingathatha kwiimeko ezihlukeneyo ze-geologic. Ibhekisela kwimeko eyahlukileyo xa ikhula kwindawo ekhululekile xa kuthelekiswa nokukhula kwindawo ethile, umzekelo. Umkhwa unokuba yinkcazelo enamandla kwi-identeral mineral identity. Nayi imimiselo yezinye iimpawu zokuncibilika kwamaminerali. Qaphela ukuba "umkhwa" unentsingiselo yamatye.
I-acicular ithetha ukufunwa. Le mineralari yi-actinolite.
I-Amygdaloidal ithetha i-almond-shaped, kodwa ibhekisela kumabhobho angaphambili asegesi e-lava abizwa ngokuthi ama-amygdules, ayenamagumbi azaliswe ngamaminerali ahlukeneyo.
"Udidi" luhlobo olubanzi lwebala. Lo mzekelo we-rhodochrosite unokuthiwa yi-stalactitic, i-lamellar, i-geode, okanye i-concentric ukuba ibukhali ngokuhlukileyo.
Amakristal asemagqabini aphezulu kwaye anqabile kunamacwecwe amacwecwe kodwa azinqabile kunezikhuni ze-acicular. I-Kyanite ngumzekelo oqhelekileyo. Kwiivenkile zamatye, khangela i-stibnite.
Umkhuba oqhekezayo u-squarer ngaphezu kokulingana nokufutshane kune-prismatic. Le mineralari yi- pyrite kwi-quartz.
Kwizenzululwazi zesiLatini, i-botryoidal ithetha "njengezidiliya." I-Carbonate, i-sulfate, kunye ne-iron oxide amaminerali bahlala benalo mkhuba. Lo mzekelo u- barite .
Umnqamlezo (umnqamlezo owenziwe ngomnqamlezo) ngumphumo wokuguqa. I-Staurolite , eboniswe apha, iyaziwa ngokuthanda le mkhuba.
I-Dendritic ithetha "njengamasebe." Iyakwazi ukubhekisela kumakristal adibeneyo, afana nee-manganese oxides, okanye iifom ezintathu-dimensional ezifana nale fikethi yethusi lomthonyama.
Iidrakra zihlobo lokuvula ngaphakathi emadwaleni ahlanganiswe neekristal ezibonakalayo. I-Amethyst , inqunywe kwii-geode, idla ngokuthengiswa kwiivenkile zamatye ngenxa yomkhwa wakhe omhle.
I-Calcite, icandelo eliphambili le-limestone, eliqhekeza ngokutsha liza kufakwa kwenye indawo njengekratshi. Ii-Chips kulo mzekelo zibonisa indlela ihlamba ngayo i-rock.
Amakristal angamaqondo alinganayo alinganayo, afana nalawa makristalu e- pyrite , afanayo. Abo bekhohlo bangabizwa ngokuba yi-blocky. Abo bekunene bangama pyritrohedron.
I-Rutile idla ngohlobo lwe-prismatic, kodwa inokwenza i-whiskers njengaleli quartz ephucukileyo. Iimveliso zamanzi ezicatshuweyo okanye ezibophekileyo zibizwa ngokuba yi-capillary, okanye i-filiform, endaweni yoko.
Iimpawu zee- Geodes zineengqungquthela ezivulekileyo, okanye iidrase, ezixutywe ngamaminerali ahlukeneyo. Iigesi ezininzi ziqulethe i-quartz okanye, njengalolu hlobo, i-calcite ngomkhwa omkhulu.
Ukuba ama-crystals awakhiwe kakuhle, oko kunokuthiwa yinto eqhelekileyo kunokuba kuthiwa yi-granular. Ezi zi- spessartine i-garnet kwi-matrix yesihlabathi.
I-Lamellae yintshona kwiSayensi yesiLatini, kwaye umkhwa we-lamellar ungomnye wecala elincinci. Le gypsum chunk ingaba lula ngaphandle kwee-crystal sheets.
I-quartz kule ngxube ye-gneiss inomkhwa omkhulu, kungabi namagqabi okanye i-crystals ebonakalayo. Ukulumkisa: amatye angachazwa ngokuba nomkhwa omkhulu. Ukuba unako, sebenzisa ixesha elifanelekileyo ngakumbi njenge-equant, granular okanye blocky ukuchaza.
Amaminerali ahlula kumashishini amancinci kakhulu anemikhwa emihle. UMika ungumzekelo oyintloko. Isibonelo se-chrysotile esivela kumgodi we-asbestos sinamaxwebhu amancinci.
Umkhwa wokutya unokuba bhetele uchazwe njenge-lamellar okanye i-tabular kwezinye iimeko, kodwa eli phepha elincinci le-gypsum alinakuthiwa enye into.
Amaminerali afana nomzimba aqhelekileyo kwi-granites. Iifama ze-Tourmaline ezijongene ne-9 zijongene kunye nokuxilongwa. Iifrims ezide kakhulu zibizwa ngokuba yi-acicular okanye fibrous.
Le "dollar yase- pyrite " ikhule ukusuka kwindawo ephambili, icacisa iplati phakathi kweendlela ze-shale. Umkhwa wokukhwabanisa unokuba nekristal yeyiphi na ifomu, ukusuka kwi-blocky kuya kwi-fibrous.
Ukuqhaqhaqhaqho kubhekisela kwiintliziyo ezintso. I-Hematite ibonisa umkhwa oqhelekileyo kakuhle. Ukuqhekeka kubonisa ukuba ubunzima obuninzi bomjikelezo buquka ukukhanya kwamakristal amancinci.
I-Rhombohedron i-cubes ehamba phambili apho kungekho kona echanekileyo; oko kukuthi, ubuso obunye bale ngqolowa ye- calcite yi-rhombus, kwaye akukho zimbonakalo ezilungileyo.
I-Rosettes yiqela lama-crystals okanye i-crystals edibeneyo ehlelwe ngeenxa zonke. Ezi rosettes ze- barite zenziwe ngamacristal tabular.
Killer Asteroids kunye neeKomethi
Ziziphi iiMnyama ezibukeka njengeziqhwaba?
Ingakanani i-oksijeni Ingaba Umthi omnye?
Izinto ze-Skaters zifanele ziyazi malunga nokulimala kweNtloko
Iimpawu zeNkathazo eziMnandi zeNtsholongwane
20 Ininzi Iindwendwe zeNdwendwe eziBaziwayo kwi- 'The Simpsons'
Más Que okanye Más De?
I-WSPU Eyilwe ngu-Emmeline Pankhurst
I-Duryea Abazalwana beMbali yeMbali
Ukubhukuda i-Backstroke kwiNgcaciso
Iimbopheleleko zabasetyhini emva kweMigqaliselo eChina nase-Iran
I-Predator Drones kunye nezinye iinqwelo ze-AA ezingabanjwanga (Ii-UAVs)
Iimephu zeeNdawo eziQinisekileyo zeeNtlanga zaseMelika eziMahlathi - Iimpawu zomthi eMntla Melika
Ubhanana bendoda yokuNgcwaba kaMary Dai- 2200 Year Old Silk Cloal Cloth
Iifomati ze-5 ezenzekayo ngenxa yeDVD yokuthengisa